အပျိုစင်ဘဝကို စွန့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာ ပျိုမေတွေအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပျိုစင်ဘဝကို မစွန့်လွှတ်ခင်မှာ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အနှစ်နှစ်အလလက ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကို မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့ လဲပစ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော့်ကို စဉ်းစားစရာ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးများ အပျိုစင်ဘဝကို မစွန့်လွှတ်ခင်မှာ စဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရအောင် ။
(၁) တစ်ယောက်ယောက်က ဖိအားပေးနေတာလား ?
အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကတော့ သင့်ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်လား ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့်လား ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ဖက်သားကို၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ကို ပျော်စေချင်လို့၊ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ရုံ သက်သက်လား? သင့်ကိုသင် ဒီလိုလုပ်ဖို့ ငယ်လွန်းသေးတယ် ဒါမှမဟုတ် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီး တွေးမိနေပါသလား? ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က မြှောက်ပေးနေတာလား စဉ်းစားပါ။ ဟုတ်နေတယ်ဆိုရင် လုပ်သင့်မလုပ်သင့်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖိအားပေးနေတာလား ?
ဒါက နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင်တဲ့ မေးခွန်းလို့ထင်ရပေမယ့် မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းပါ။ သင့်ကိုသင် ဖိအားပေးနေတာလား? စမ်းလုပ်ကြည့်ချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ သိချင်တာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပေးကြည့်ပါ။ သင့်ချစ်သူကို ချစ်လို့လား၊ ငြင်းရမှာ အားနာနေလို့လား ဒါမှမဟုတ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပြီး လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ကိုယ့်ဘာသာကို ဆုံးဖြတ်ပါ ။
(၃) သင်ရွေးချယ်တဲ့သူက လူကောင်းဟုတ်ရဲ့လား ?
သင့်ရဲ့လက်ရှိလက်တွဲဖော်ဟာ သင့်ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုတောင် ပေးရလောက်အောင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူ ဟုတ်ရဲ့လား၊ သင့်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးရဲ့လား၊ သင့်ကို တစ်သက်လုံး တာဝန်ယူမယ့်သူလားဆိုတာ အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သိပ်လည်းမယုံရဘူး၊ သင့်ကိုလည်း တန်ဖိုးထားပုံမပေါ်ဘူး၊ ကတိတွေကိုလည်း အလွယ်ပဲပေးနေပြီး ပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့ဆိုရင်တော့ သင့်အပျိုစင်ဘဝကို စွန့်လွှတ်သင့်လားဆိုတာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။
(၄) နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား ?
အကယ်၍သင့်မှာသာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့ရင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုသူထားသွားခဲ့ရင်၊ ဒီအကြောင်းတွေ ပြန့်သွားခဲ့ရင်၊ တန်ဖိုးမထားတော့ရင် ခံနိုင်ရည်ရှိရဲ့လား၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင်တို့ကွေကွင်းခဲ့ရရင် ဖြစ်လာသမျှအကျိုးဆက်တွေကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာပြန်မေး ကြည့်ပါဦး ။
(၅) လိပ်ပြာမလုံသလို ခံစားရလား ?
လူဆိုတာ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံဖို့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာကို သင်လုပ်ရမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာမလုံသလို ခံစားရတယ်၊ စိတ်တွေရှုပ်နေတယ်၊ အမှားကြီးတစ်ခုလို ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်မှ နောင်တရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင်ငြင်းပယ်မလား ဇွတ်တိုးမလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသေချာချာပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ။
အပြိုစငျဘဝကို မစှနျ့လှတျခငျမှာ မိနျးကလေးတှေ စဉျးစားသငျ့တဲ့ အရာလေးတှေ
အပြိုစငျဘဝကို စှနျ့လှတျဖို့ဆိုတာ ပြိုမတှေအေတှကျ အကွီးမားဆုံးသော ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ အပြိုစငျဘဝကို မစှနျ့လှတျခငျမှာ စဉျးစားစရာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အနှဈနှဈအလလက ထိနျးသိမျးခဲ့တဲ့အရာတဈခုကို မိနဈပိုငျးလေးနဲ့ လဲပဈဖို့ဆိုတာ တျောတေျာ့ကို စဉျးစားစရာ ကိစ်စဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးမြား အပြိုစငျဘဝကို မစှနျ့လှတျခငျမှာ စဉျးစားသငျ့တဲ့အကွောငျးအရာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ကွညျ့လိုကျရအောငျ ။
(၁) တဈယောကျယောကျက ဖိအားပေးနတောလား ?
အရမျးအရေးကွီးတဲ့ စဥျးစားစရာတဈခကျြကတော့ သငျ့ရဲ့အပြိုစငျဘဝကို စှနျ့လှတျလိုကျတာဟာ သငျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြလား ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျယောကျရဲ့ ဖိအားပေးမှုကွောငျ့လား ဆိုတာပါပဲ။ တဈဖကျသားကို၊ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျယောကျကို ပြျောစခေငျြလို့၊ ဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြရုံ သကျသကျလား? သငျ့ကိုသငျ ဒီလိုလုပျဖို့ ငယျလှနျးသေးတယျ ဒါမှမဟုတျ မလုပျသငျ့ဘူးဆိုပွီး တှေးမိနပေါသလား? ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျယောကျက မွှောကျပေးနတောလား စဉျးစားပါ။ ဟုတျနတေယျဆိုရငျ လုပျသငျ့မလုပျသငျ့လညျး ကိုယျ့ဘာသာကိုယျပဲ ဆုံးဖွတျပါ။
(၂) ကိုယျ့ကိုယျကို ဖိအားပေးနတောလား ?
ဒါက နညျးနညျးကွောငျတောငျတောငျတဲ့ မေးခှနျးလို့ထငျရပမေယျ့ မေးသငျ့တဲ့မေးခှနျးပါ။ သငျ့ကိုသငျ ဖိအားပေးနတောလား? စမျးလုပျကွညျ့ခငျြတာလား ဒါမှမဟုတျ ဒါကဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတာ သိခငျြတာလား ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျပေးကွညျ့ပါ။ သငျ့ခဈြသူကို ခဈြလို့လား၊ ငွငျးရမှာ အားနာနလေို့လား ဒါမှမဟုတျ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးကွညျ့ပွီး လုပျသငျ့မလုပျသငျ့ ကိုယျ့ဘာသာကို ဆုံးဖွတျပါ ။
(၃) သငျရှေးခယျြတဲ့သူက လူကောငျးဟုတျရဲ့လား ?
သငျ့ရဲ့လကျရှိလကျတှဲဖျောဟာ သငျ့ရဲ့အပြိုစငျဘဝကိုတောငျ ပေးရလောကျအောငျ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့သူ ဟုတျရဲ့လား၊ သငျ့ကို တကယျခဈြမွတျနိုးရဲ့လား၊ သငျ့ကို တဈသကျလုံး တာဝနျယူမယျ့သူလားဆိုတာ အရမျးကို အရေးကွီးတဲ့ မေးခှနျးဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ သိပျလညျးမယုံရဘူး၊ သငျ့ကိုလညျး တနျဖိုးထားပုံမပျေါဘူး၊ ကတိတှကေိုလညျး အလှယျပဲပေးနပွေီး ပေါ့ပကျြပကျြနဲ့ဆိုရငျတော့ သငျ့အပြိုစငျဘဝကို စှနျ့လှတျသငျ့လားဆိုတာ နောကျတဈကွိမျ ပွနျစဉျးစားလိုကျပါဦး။
(၄) နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှအေတှကျ ပွငျဆငျပွီးပွီလား ?
အကယျ၍သငျ့မှာသာ ကိုယျဝနျရှိလာခဲ့ရငျ၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ရောဂါတဈခုခုဖွဈလာခဲ့ရငျ၊ ဒါမှမဟုတျ သငျ့ကိုသူထားသှားခဲ့ရငျ၊ ဒီအကွောငျးတှေ ပွနျ့သှားခဲ့ရငျ၊ တနျဖိုးမထားတော့ရငျ ခံနိုငျရညျရှိရဲ့လား၊ ကွိုတငျပွငျဆငျထားပွီးပွီလား ဆိုတဲ့မေးခှနျးဟာ အရမျးကို အရေးကွီးပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သငျတို့ကှကှေငျးခဲ့ရရငျ ဖွဈလာသမြှအကြိုးဆကျတှကေို တဈယောကျတညျး ရငျဆိုငျနိုငျရဲ့လားဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကို သခြောပွနျမေး ကွညျ့ပါဦး ။
(၅) လိပျပွာမလုံသလို ခံစားရလား ?
လူဆိုတာ ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျလုံဖို့ အရေးကွီးဆုံးဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီအရာကို သငျလုပျရမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို လိပျပွာမလုံသလို ခံစားရတယျ၊ စိတျတှရှေုပျနတေယျ၊ အမှားကွီးတဈခုလို ခံစားနရေတယျဆိုရငျတော့ နောကျမှ နောငျတရမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သငျငွငျးပယျမလား ဇှတျတိုးမလားဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကို သသေခြောခြာပွနျမေးကွညျ့လိုကျပါ။